tariby varahina vita amin'ny enamel (tohiny)
Fenitra vokatra l. Tariby enameled 1.1 vokatra fenon'ny tariby boribory vita amin'ny enamel: gb6109-90 andian-tsarimihetsika; zxd / j700-16-2001 indostrialy fanaraha-maso anatiny 1.2 fari-pahaizana momba ny tariby enina enina: gb / t7095-1995 andiany fenitra ho an'ny fomba fitsapana ireo tariby boribory enina sy enina: gb / t4074-1 ...
Tariby varahina vita amin'ny vy (tohiny)
Ny tariby misy enamel dia karazan-tariby miolikolika, izay misy ampahany roa: conducteur sy layer insulate. Aorian'ny fanaovana annealing sy fanalefahana dia hosodoko sy hatsatsika imbetsaka ny tariby miboridana. Na izany aza, tsy mora ny mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fenitra sy ny mpanjifa. Io dia ...
Fantatrao ve ireo fahalalana rehetra momba ny tariby fanoherana ireo?
Ho an'ny tariby fanoherana, ny herin'ny fanoherana dia azo faritana araka ny fanoherana ny tariby fanoherana. Arakaraka ny maha-lehibe ny heriny dia azo inoana fa olona maro no tsy mahalala misafidy ny tariby fanoherana, ary tsy dia misy fahalalana firy momba ny tariby fanoherana. , Xiaobian wi ...
Ny vidin'ny nikela dia mahatratra 11 volana avo indrindra amin'ny fanantenana fitakiana matanjaka
Nickel, mazava ho azy, no metaly fanefitra vy ao Sudbury sy ny mpampiasa lehibe roa ao an-tanàna, Vale sy Glencore. Ary ao ambadiky ny vidiny avo kokoa dia ny fanemorana ny fanitarana ny fahaizan'ny famokarana any Indonezia hatramin'ny taona ho avy. "Taorian'ny fihoaram-pefy tamin'ny fiandohan'ity taona ity, mety misy ny fahateren'ny ...
Bayonet Heater, Open Coil Heater, Nickel Wire, Ireo singa fanafanana, Bayonet Heating Heating, Wire fanoherana,